ỊWỤNYE NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA NA LAPTỌỌPỤ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Na oge m n'efu, ana m aza ajụjụ site na ndị ọrụ na ajụjụ QQ na Mail.ru na azịza ọrụ. Otu n'ime ụdị ajụjụ kachasịsịsịsịsị iche gbasara ịkwanye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ, ha na-abụkarị ụda olu a:
Wụnye Windows 7, otu esi esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ asus
Ebe ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ dị otú ahụ, nye njikọ
Na ihe yiri ya. Ọ bụ ezie na, na tiori, a gaghị ajụ ajụjụ maka ebe ị ga-ebudata na otu esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ nke a doro anya na ọ dịghị akpata nsogbu ọ bụla (enwere ụfọdụ maka ụdị na sistemụ arụmọrụ). N'isiokwu a, m ga-anwa ịza ajụjụ ndị a na-ajụkarị maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na Windows 7 na Windows 8. (Leekwa Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ Asus, ebe ibudata na otu esi arụnye)
Ebee ka ibudata ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ?
Ajụjụ nke ebe ị ga-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ nwere ike ịbụ ihe kachasị. Ezigbo azịza ya sitere na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta nke laptọọpụ gị. N'ebe ahụ, ọ ga - abụ n'efu, ndị ọkwọ ụgbọala ga - (kachasị) nwere mbipute kachasị ọhụrụ, ị gaghị eziga SMS ma enwere nsogbu ndị ọzọ.
Ndị ọkwọ ụgbọala na-ahụ maka Apt Aspire laptọọpụ
Ọchịchị na-ewepụta ndị ọrụ nchịkọta maka akwụkwọ laptọọpụ ewu ewu:
Asus //www.asus.com/ru/ (họrọ ngwaahịa ma gaa na "Download" taabụ.
Sony Vaio //www.sony.ru/support/ru/hub/COMP_VAIO (Otu esi arụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala Sony Vaio, ma ọ bụrụ na ha adịghị arụ ọrụ site na usoro ịchọrọ, ị nwere ike ịgụ ebe a)
Samsung / http://www.samsung.com/en/support/download/supportDownloadMain.do
Odi akwukwo ndi ozo di maka ndi ozo ndi ozo, ichota ha abughi ihe siri ike. Nanị ihe bụ, ajụla Yandex na Google ajụjụ banyere ebe ị ga-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala n'efu ma ọ bụ na-edeghị aha. Ya mere, dị ka a na-eme, ị gaghị akpọrọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị (a gwaghị ha na nbudata na-n'efu, nke a na-agaghị ekwu), mana na ebe nrụọrụ weebụ a mapụtara nke ọma maka arịrịọ gị, ihe ndị dị na ya agaghị adabere n'ihe ị tụrụ anya ya. Ọzọkwa, na saịtị ndị dị otú ahụ, ọ na-enye gị nsogbu ịnweta ọ bụghị naanị ndị ọkwọ ụgbọala, kamakwa nje, trojans, rootkits na scum na-abaghị uru na kọmputa gị.
Arịrịọ nke a ekwesịghị ịtọ
Kedu ka esi budata ndị ọkwọ ụgbọala site na saịtị ọrụ ahụ?
N'ọtụtụ saịtị nke ndị na-emepụta laptọọpụ na ngwa ndị ọzọ dijitalụ na ibe niile, e nwere njikọ "Nkwado" ma ọ bụ "Nkwado", ma ọ bụrụ na saịtị ahụ na-akọwa naanị n'asụsụ Bekee. Na ibe nkwado, n'aka nke ya, ị nwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala niile dị mkpa maka laptọọpụ laptọọpụ gị maka usoro eji arụ ọrụ. Ana m edetu na ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ị wụnyela Windows 8, mgbe ahụ, ndị ọkwọ ụgbọala maka Windows 7 nwekwara ike (ọ ga-adị mkpa ka ị na-agba ọsọ na nhazi na ọnọdụ nkwado). Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala a anaghị adịkarị mfe. Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na saịtị ahụ nwere mmemme pụrụ iche maka nbudata na nbudata na ọkwọ ụgbọala.
Ntinye ngwa ngwa nke ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ
Otu n'ime ndụmọdụ ndị kachasị enyere ndị ọrụ na nzaghachi maka ajụjụ metụtara ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na-eji usoro Nduzi Pack Driver, nke ị nwere ike ibudata na free http://drp.su/ru/. Usoro ihe omume ahụ na-arụ ọrụ dị ka ndị a: mgbe ịmalite ya na-achọpụta ngwa ngwa ngwaọrụ niile arụnyere na kọmputa ma nye gị ohere ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile na-akpaghị aka. Ma ọ bụ ọkwọ ụgbọala ahụ iche iche.
Usoro ihe omume nke nkwụnye nrụnye nke Ọkwọ ụgbọala Pack Drivers
N'ezie, enweghị m ike ikwu ihe ọjọọ gbasara usoro a, mana, n'oge ndị ahụ mgbe ịkwesịrị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ, anaghị m akwado ya. Ihe kpatara ya:
Ọtụtụ mgbe, laptọọpụ nwere ngwa ngwa. Ihe ngwọta ọkwọ ụgbọala ga-arụnye ọkwọ ụgbọala dakọtara, ma ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma - ọ na-emekarị na nkwụnye Wi-Fi na kaadị netwọk. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụ maka laptọọpụ, ụfọdụ ngwaọrụ adịghị akọwacha ma ọlị. Biko lee nseta ihuenyo dị n'elu: 17 ọkwọ ụgbọala arụnyere na laptọọpụ m amaghị ihe omume ahụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na m arụnyere ha n'iji ya, ọ ga-eji dochie anya ha (na amaghi ogo, dịka ọmụmaatụ, ụda nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ma ọ bụ Wi-Fi agaghị ejikọta) ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ ma ọlị.
Ụfọdụ ndị na-arụpụta na ngwanrọ nke ha iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala gụnyere ụfọdụ patches (patches) maka sistemụ arụmọrụ na-eme ka arụmọrụ nke ndị ọkwọ ụgbọala hụ. Na DPS nke a abụghị.
Ya mere, ọ bụrụ na ịnweghị ọsọsọ (nrụnye akụrụngwa karịa ngwa nbudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala n'otu n'otu), ana m enye gị ndụmọdụ ka ị jiri ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. Ọ bụrụ na ị kpebiri iji ụzọ dị mfe, kpachara anya mgbe ị na-eji Ọkwọ ụgbọala Pack Solution: ọ ka mma ịgbanwe usoro ahụ na usoro ọkachamara ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ n'otu n'otu n'enweghị ịhọrọ "Wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ihe omume" niile. Anaghị m akwado ịhapụ mmemme na ikikere maka mmelite akpaka akpaka. Ha, n'eziokwu, adịghị mkpa, ma na-eduga n'iji nwayọọ nwayọọ na-arụ ọrụ, batrị batrị, na mgbe ụfọdụ ọbụna ihe ndị na-adịghị mma.
Enwere m olileanya na ozi dị n'isiokwu a ga-aba uru maka ọtụtụ ndị na - enweghị mmasị - ndị nwe ụlọ laptọọpụ.